University Adaamaa Keessatti Ayyaanni Ginbot 20 Wayyaaneen Qopheessite Fashale. Tika TPLF tokko irratis tarkaanfiin fudhatame. | QEERROO
Posted on May 29, 2012 by Qeerroo
2 thoughts on “University Adaamaa Keessatti Ayyaanni Ginbot 20 Wayyaaneen Qopheessite Fashale. Tika TPLF tokko irratis tarkaanfiin fudhatame.”
C.G on May 29, 2012 at 2:44 pm said:
Akkas male qeerroo bilisummaa!! Jabadha ayyaan ummaataa oromoo si hagargaaru.nutiis isiin waliin jira.
Oromiyaan qabsoo ilmaan ishetiin ni bilisoomti!!!!!!!!!!
obsaa on May 30, 2012 at 4:57 am said:
Dhalootni oromoo ammaa cimina abbootii keenyaa fi dadhabbina isaanii irraa barumsa fudhachuun akkuma nafxanyoota lafa jala /malaan/adeemuudhaan haala itti injifannoon qabsoo oromoo yaroo dhihoo keessatti dhuftu uumuu qaba.